ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Key ကိုအနောက်စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်, သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူဖလော်ရီဒါ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 23 2021 |2မိဖတ်ပြီးသား
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေ Friendliest စီးတီး!
Key ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေ, တစ်ခါတစ်ရံ Conch သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်လူသိများ, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆီသို့ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဖလော်ရီဒါသော့ချက်များ၏အဝေးဆုံးပွိုင့်တွင်တည်ရှိပြီး, ကကျိန်းသေတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ရမ်သမား၏ရိုက်ခတ်သံမှချီတက်.
သင်သည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လေထုကိုရှာဖွေနေပါ, ဤအရပ်ဌာနကထပြီးကဲ့သို့ကောင်း. နှင့်အလှအပကိုသင်မှတ်သားလောက်သောသော့ချက်များ architecture ကိုမှဇာတိ hibiscus ပန်းပွင့်ဖို့တောက်နေဝင်ချိန်မှ Emerald အပြာ / စိမ်းလန်းသောကိုရေထဲကနေကြည့်ရှုနေရာတိုင်းနှင်ပြည့်စုံ. ဤအရပ်သည်ကမ္ဘာ့အဘယ်သူမျှမကအခြားကဲ့သို့ဖြစ်၏.
သို့သော် ပို. အရေးကြီးသည့်အချက်မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များကိုခရီးသွားလာကျွန်တော်တို့ကိုရန်, ကထပြီးအဖြစ်ဤအရပ်ဌာနအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် Friendly ဖြစ်.
Key ကိုအနောက်နိုင်ငံများတွင်အများစုမှာနေရာထိုင်ခင်းအငယ်အမျိုးအစားဖြစ်ကြ၏, နည်းနည်း inns, အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာသုံးဆောင်, နံရံတွေနှင့်ထိုကဲ့သို့သော. Key ကိုအနောက်နိုင်ငံများရဲ့ Center ကတရားရုံးသို့ – သမိုင်းဝင်အင်း & နံရံတွေ Key ကိုအနောက်နိုင်ငံများတွင်တွေ့ရှိရရန်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ဖော်ရွေနေရာထိုင်ခင်း၏စုံလင်ဥပမာဖြစ်တယ်.
စင်တာကတရားရုံးချုပ်ကွဲပြားခြားနားသောကမ်းလှမ်း, ထူးခြားသော, သက်သာခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သောအခန်းများ, အစုံ, Villas, ကွန်ဒိုနှင့်နံရံတွေ, Duval လမ်းမှာနေအဆင့်ဆင့်. အများစုမှာရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့အတွက်သီးသန့် Jacuzzis သို့မဟုတ်ပင်ပုဂ္ဂလိကရေကူးကန်ရှိသည်! အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကြိုဆိုထက်ပိုပါတယ်, သူတို့ကိုးကွယ်နေကြတယ်! သင့်ရဲ့လေးလုံးအတော်များများကမျက်စိအဆွေခင်ပွန်းဘို့အတွက်စစ်ဆေးနေအပေါ်မှာအထူးအားရစရာအဘို့အမေးပါ.
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အားလုံးအဖြစ် Key ကိုအနောက်နိုင်ငံများကိုယ်နှိုက်ကအဖြစ်ကိုပြန်ချထားကြောင်းလေးခုနေထိုင်သူခွေးတဦးနှင့်အတူဆော့ကစားချင်တဲ့အကြောင်း,.
အဆိုပါဖော်ရွေတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့န်ထမ်းများကသင့်နေထိုင်ပိုပြီးပျော်စရာကြိုးစားအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့ website ကိုကြည့်ရှုဖို့ www.centercourtkw.com ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ.
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူအေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်ယူခြင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားမရ. Key ကိုအနောက်တစ်ခုချင်းစီဦးတည်ချက်ကိုတစ်ဒါဇင်လုပ်ကွက်ထက်အများကြီးမပိုကြောင်းနှင့် strolling နှင့်လူများကိုကြည့်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်. တဘက်ကဲ့သို့ပကတိအဟောင်းအိမ်တွေအများကြီး, စျေးဆိုင်များ, အနုပညာရှင်များ, ဥယျာဉ်များ, သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ချင်တဲ့အရာအားလုံးကို, နှင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်လျှောက်သွားကြဖို့ကြိုဆိုရလိ​​မ့်မည်.
တောင်မှ Key ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာစားတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖော်ရွေမှုကိစ္စဖြစ်ပါသည်. Duval လမ်းပေါ်တလျှောက်တွင်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုကြိုဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အထူးကုသခံယူတော်မူမည်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးတစ်ဒါဇင်စားသောက်ဆိုင်ရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့အယ်ဒီတာကသူ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးကိုနှင့်အတူမကြာသေးမီကရှိ၏, Ruggles. အဲဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖော်ရွေ taverns / စားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးမှလမ်းလျှောက်သွားခဲ့ကြသည်, ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ဦးကြော့ပြင်သစ်စားသောက်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနှင့် menu ကိုထွက်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း. တစ်ခုစုံစမ်းရေး Ruggles ကြိုဆိုကြောင်းဖြစ်ပါ့မလားကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်. အဖြေခဲ့, “သူ Steak သို့မဟုတ်ကြက်သားအလိုရှိ?”
Key ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်စားသောက်ရန်နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရင်းနှီးဖော်ရွေသောအရပ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုဖို့ပဲ www.pettravel.com/Destinations/KeyWest_FL.cfm ကိုသွား.
Just Perfect ခံစားရဘယ်တစ်ဦးဂရိတ် Kiss များအတွက်ထိပ်တန်းအကြောင်းသိကောင်းစရာများ